HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKu soo dhowow Gaarka ah Diyaaradda Qatar Airways ee '1 Millionaire Rakaab' oo ku taal Sabiha Gökçen
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
sabiha gokcende qatar airwaysin milyan rakaab ah
Ku Soo Dhawow Gaarka ah 1 Milyan oo Rakaab ah oo Reer Qatar ah oo jooga Sabiha Gökçen; Soo dhaweyn gaar ah ayaa loo habeeyay 1-da milyan ee rakaabka ee Diyaaradda Qatar Airways ee ku taal Sabiha Gökçen (W SAW şehir), garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul. Gaaritaanka awoodaan sanadkii shanaad ee duulimaadyada SAW oo xubin ka ah shirkada oneworld, Qatar Airways ayaa 21 duulimaad usbuucii ka qabta garoonka diyaaradaha ee Istanbul Sabiha Gökçen.
Shirkadda Qatar Airways ayaa ku biirtay shabakadda duullimaadka ee garoonka diyaaradaha ee Sabiha Gokcen International Airport bishii May 2014 iyada oo ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee la qorsheeyay.
Magaalada caasimada ah ee Dooxa ee Qatar Airways rakaabka İrem Şeker ee ku tagaya Istanbul Sabiha Gökçen oo ay weheliso xaaskiisa, ayaa waxay ahayd rakaabkii ugu nasiibka badnaa ee 1 milyan. Şeker waxaa garoonka ku soo dhoweeyay ubax ay ka heleen Maamulaha OSH Ersel Göral iyo Qatar Airways bariga Yurub - Maamulaha South South Ferit Aksun. Markaas Irem Seker iyo mas'uuliyiin kale oo galay goobta is biirsaday ayaa la shiray xubno ka tirsan saxaafadda. Isagoo ka hadlayey xafladda, madaxa ISG Ersel Göral wuxuu yiri: uz ku hanweynahay inaan la shaqeyno Qatar Airways iyo inaan adeeg u fidiyo rakaabkeena garoonka iyo tas-hiilaadkayada. Waxaan ku soo marnay socod dheer safarkayaga oo bilaabay shan sano ka hor Qatar Airways. Joogitaanka Qatar Airways kaliya ma taageerto bartilmaameedka kobcinta ee laakiin sidoo kale waxay naga caawineysaa inaan xoojino booska 'SAW' oo ah mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ugu weyn Yurub. Waxaan rajeyneynaa iskaashigan inuu sii wadi doono inuu keeno guulo badan labada shirkadood ee Qatar Airways iyo SAW sanadaha soo socda. Waxaan sii wadi doonnaa inaan siino waxtarka rakaabkayaga iyadoo ay ugu wacan tahay isku xirka shabakadda duulimaadyada ee Qatar Airways iyo tas-hiilaadka adeegga wanaagsan iyo tas-hiilaadka ugu wanaagsan ee gegada diyaaradaha ee Istanbul Sabiha Gökçen Airport.
Khudbaddiisa, Qatar Airways Bariga Europe - Maamulaha Gobolka Koonfurta Ferit Aksun wuxuu yiri: olarak Sida Qatar Airways, waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhoweyno rakaabkeena 1-aad ee milyan ee dariiqaas ku jira annagoo u dabaaldegneyna sannad-guuradii shanaad ee duullimaadyadeena Sabiha Gökçen. Izmir Sanadkan aannu ogaanno iyo dadaalka aan ku siin suuqa Turkey ee ay ku daray dalal aannu mar kale muujiyay. Waxaan rajeyneynaa in xiriirkeenu uu sii socon doono sanadaha soo socda. ”
Khudbadaha kadib, therem Şeker rakaabka rakaabka ah waxaa la siiyay laba tikidhada Sabiha Gökçen - Doha oo ay qortay shirkadda Qatar Airways. Isla waqtigaas, iyada oo ay la socdaan shaqaalaha duullimaadyada, rakaab kale oo Turkish ah ayaa loo adeegsaday dhadhanka caadiga ah ee Turkiga iyo cabbitaannada. Ka dib markii keega xafladda la jaray, hadiyado ayaa la is weydaarsaday inta udhaxeysa SAW iyo Qatar Airways.
Safarrada East Express Passengers Ku soo dhawow Hadi leh iyo Mehteranli
Sabiha Gökçen Duulimaad Duulimaad Duulimaad Duulimaad Gaar ah (War Saxaafadeed)
Gaadiidka khatarta ah ee burburay
Si toos ah ula xiriir İrem